Vakinankaratra-ORTVak: haverina ny lazan’Andraikiba | NewsMada
Vakinankaratra-ORTVak: haverina ny lazan’Andraikiba
Par Taratra sur 05/09/2018
Taitra amin’ny torimasony ny Ofisim-paritry ny fizahantany any Vakinankaratra (ORTVak).
Nilaza ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny ORTVak, Rakotoson Harinaivo, fa “ankoatra ny mpizahatany vahiny, hitodihana koa ny Malagasy sy ny olona eto an-toerana”. Tsy hionona amin’ny foibe misy ranomafana ao Antsirabe fa hampiroboroboana koa ny fizahantany ifotony sy ambanivohitra, ireo toerana azo tsidihina miisa 12 any Vakinankaratra.
Hanombohana azy ny any Andraikiba ka hisy hetsika manokana karakaraina, ny 29 septambra ho avy izao, ahitana fialamboly samihafa. Lalao fifaninanana volley-ball ao anaty fotaka, handraisan’ny mpianatra, ny mpiasa ary ny orinasa anjara. Hisy koa fifaninanana mandefa papango ka samy mamorona ny azy ny mpandray anjara tsirairay, natao ho an’ny rehetra.
Hanamafisana ny hoenti-manan’izy ireo ity hetsika ity satria tsy manana afa-tsy ny 50%-n’ny haba “vignette” aloan’ny trano fandraisam-bahiny ny fidiram-bolany. Telo ihany ny trano fandraisam-bahiny lehibe any Vakinankaratra fa madinika na salantsalany ny hafa.